ဗဟုသုတ Archives - Latest Myanmar News
မြေဧက အလွယ် တွက်နည်း( ၂ )
July 29, 2021 by Latest Myanmar News
မြေဧကတွက်နည်း( ၂ ) လူတွေအမေးများတဲ့ မြေအကြောင်းများ ၁ ဧက = ၂၀၈.၇၁၁ ပေ × ၂၀၈.၇၁၁ ပေ ၁ ဧက = ၄၀၄၇ စတုရန်းမီတာ ၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ ၁ ပေ(sqft)= ၀.၀၉၂၉ Square metre ၁ မီတာ = ၃.၂၈၁ ပေ ၁ စတုရန်းမီတာ = ၁၀.၇၆၄ စတုရန်းပေ ၁ ဟက်တာ = ၂.၄၇၁ ဧက Square feet မှ ဧကပြောင်း Sqft ÷ 43560= ( ) ဧက ဥပမာ 20000 … Read more
အိမ် ၊ မြေ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွင် အဓိက ပါဝင်ရမည့် အချက်လေးများ
July 26, 2021 by Latest Myanmar News
အိမ် နှင့်မြေ သို့မဟုတ် မြေကွက် လွှဲပြောင်းရောင်းချရာတွင် ရေးသားချုပ်ဆိုသော မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွင် အဓိက ပါဝင်ရမည့် အချက်လေးများ။ ၁။ ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့သည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြရပါမည်။ ၂။ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးရေးကဒ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာတို့ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြရပါမည်။ ၃။ ရောင်းချသည့်တန်ဖိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြရပါမည်။အကယ်၍တန်ဖိုးလျော့ပြပါက အခွန်လိမ်လည်မှုအရ အရေးယူခြင်း ခံရပါမည်။ လျော့ပြသည့်အခွန်တန်ဖိုး၏ ( ၁၀ )ဆကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ခံရနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ၄။ ရောင်းချသည့် မြေကွက်၏ ဦးပိုင်အမှတ်နှင့် အလားလေးရပ်၊ မြေဧရိယာအတိုင်းအတာတို့ကို ဖော်ပြကြရပါမည်။ ဂရန်၌ ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရပါမည်။ ၅။ ရောင်းသူက ငွေအပြေအကျေ ရရှိပြီးကြောင်းနှင့် ဝယ်သူကလည်း အိမ်နှင့်မြေသို့မဟုတ် မြေကို … Read more
ငှက်ပျောခွံ ဒီလိုအသုံးဝင်မှန်း ခုမှပဲ သိတော့တယ်
July 23, 2021 by Latest Myanmar News
ငှက်ပျောသီး စားပြီးရင် အခွံတွေကို မပစ်လိုက်ပါနဲ့ အရမ်းအသုံး ဝင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ငှက်ပျောသီး အသုံးဝင် ပုံ သီးမွှေး၊ ဖီးကြမ်း၊ ရခိုင်၊ ဝက်မလွတ် ပွဲထဲက ငှ က်ပျောသီး ပါမကျန် သူ့အရသာ လေးနဲ့ သူကော င်းလို့မွန်လို့ စားကြတယ်။ အိမ်နီးနားချင်း တွေကိုဝေကြတယ်။ အမယ်..ဦးရှင်ကြီးတင်လို့ စားရတဲ့မုန့် ဆမ်းနဲ့ ငှက်ပျော သီးလေးဆို ကောင်းလွန်းလို့ အသီးကပဲ စားကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အ ခွံ ကလည်း အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ စားနေကြတဲ့ ငှက်ပျော သီးခွံကို စိုက်ပျိုး ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုသုံး လို့ရနေတယ် ဆိုတဲ့ ကြောင်းကို တင်ဆက် ပေးမှာမို့ ငှက်ပျော သီး ကျွေးပြီးရင် … Read more
အေးတဲ့ရာသီမှာ ဒီဇယ် အင်ဂျင် အနှိုးရခက်ခြင်း ပြဿနာအတွက်
July 22, 2021 by Latest Myanmar News
ကားဆရာနှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ကားဆရာဖြစ်လာရင် ဓာတ်ဆီ ကားရော၊ ဒီဇယ်ကားပါမောင်းရမှာဘဲ။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်က လူစီးကားလေး တွေလောက်ဘဲ သုံးပါတယ်။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်က ပိုပြီးအသုံးများပါတယ်။ ထရပ်ကားတွေ၊ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေ၊ ထရေလာကုန်တင်ကားကြီးတွေ၊ Dumper Truck တွေ၊ စက်ယန္တရား ကြီးတွေအားလုံး ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဘဲ သုံးပါတယ်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကအား ကောင်းတယ်။ အကြမ်းခံတယ်။ ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းရတာနည်းတယ်။ ဆီ စားသတ်သာပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက် သာတယ်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့စာရင် ပြဿနာနည်းတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကို အသုံးများကြတယ်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် ဖွဲ့စည်းပုံမတူသလို အလုပ်လုပ်ပုံ လည်း ခြားနားပါတယ်။ ပထမဆုံး လောင်စာဆီမတူပါဘူး။ ဒီဇယ်ဆီက နည်းနည်းချွဲပျစ်ပါတယ်။ ချွဲပျစ်တဲ့အ တွက် ချောဆီဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒီဇယ် Injection Pump နှင့် … Read more
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် လျှပ်စစ်အားပိုကုန်တဲ့ အိမ်တွင်းသူခိုး ဟုတ်မဟုတ် ရွေးဝယ်တတ်ဖို့ ဖတ်ထားနော်
July 21, 2021 by Latest Myanmar News
အဲကွန်းနဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်အဲဒါကိုကြည့်ပါ အဲဒါလေးကို Star rating လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါမပါရင် ဘာတံဆိပ်ဖြစ်ဖြစ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုက ကိုယ်တိုင်တိုင်းကြည့်မှကောင်းမကောင်းသိရမှာပါ။ ပုံမှန်ကတော့1-Star ကနေ 5-Star ထိရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် Rating သတ်မှတ်ချက်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းကဆို ယိုးဒယားနဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေရဲ့ Rating ကအစစ်အမှန်ရထားတာဆိုရင် တကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ 5-star အဆင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက စွမ်းအင်သုံးစွဲအရမ်းသက်သာပါတယ်။ အိမ်သုံးအဲကွန်းမှာတော့Start rating မြင့်ရင်မြင့်သလိုဝယ်ရင်းဈေးတော့ Rating နိမ့်တဲ့စက်တွေစာရင် ၂၅% လောက်ပိုကောင်းပိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနှစ်မကြာခင်မှာပဲ မီတာခသက်သာသွားလို့ နောက်နှစ်တွေမှာ တနှစ်ကိုမီတာခ သိန်းကျော်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Star rating မပါပဲမီတခသက်သာတဲ့ အဲကွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်နားလည်မှသိနိုင်မှာပါ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တိုင်းCOP , EER ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးကြည့်ပါCOP-3.5 အောက် ၊EER-11အောက်စက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါမဖြေနိုင်ရင်..မဝယ်ပါနဲ့။ဝယ်မိရင်အိမ်ပေါ်မှာ အိမ်တွင်းသူခိုးတကောင်ရောက်နေသလိုပါပဲ။ ဥပမာ အဲကွန်း … Read more
လေ့လာချက်တွေအရ ကမ္ဘာပေါ်က လူပေါင်း 840 သန်းက အခုချိန်ထိ မီးမရကြသေး ပါဘူး… လျှပ်စစ်မီး လိုအပ်နေတဲ့ မိသားစုတွေ အတွက် ပလက်စတစ် ဘူးခွံလေးတွေ သုံးပြီး မီးထွန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို The Liter of Light လို့ အမည်ရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က စိတ်ကူးရခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က လူထောင်ပေါင်းများစွာ အတွက် အလင်းရောင်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ယူဆောင်လာ ပေးခဲ့ပါတယ်။ The Liter of Light အဖွဲ့ဝင်တွေက စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်တွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ The Liter of Light အဖွဲ့ကို ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ Myshelter ဖောင်ဒေးရှင်းက 2011 ခုနှစ်မှာ … Read more
Camera စကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံစတင်ပြီး ရိုက်ကူးမည့် သူများအတွက် မှတ်သားဖွယ် အချက် (25) ချက် 1) ဆိုလိုရင်းရှင်းလင်းပါစေ။ ပေးချင်တဲ့ Message နဲ့ ရိုက်ချင်တဲ့ Subject ကဘာလဲ မြင်သာပါစေ။ 2) ကြည့်သူက Subject ကိုမပြောပဲသိပါစေ။ Subject ကိုမြင်သာအောင် ကွဲပြားတဲ့ အရောင်၊ အလင်းအမှောင်၊ အခွင့်သာရင် Framing လုပ်ပြီးတော့ ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ပေးပါ။ 3) ရိုးရိုးရှင်းရိုက်ပါ။ 4) မသေချာရင်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပုံကိုအထောက်အပံ့မဖြစ်ဘူးထင်တာမှန်သမျှ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ. မလွယ်ရင် Ponint of View ပြောင်း၊ 5) Negative Space အများကြီးမပါ၀င်ပါစေ။ ပုံအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မှ အကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်မှ NS ကိုသုံးပါ။ မလိုအပ်ပဲများနေရင်မကောင်းပါဘူး။ 6) Subject နဲ့ပုံကိုအပြည့်ဖြည့်ထားပါ။ 7) … Read more
July 18, 2021 by Latest Myanmar News
မိမိ ကိုယ်တိုင်း ခြင်ရိုက်တံကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်နည်းလေး ခြင်ရိုက်တံ ပျက်သွားတိုင်း မပစ်ကြပါနဲ့ ပြင်လိုက်ရင် (၂)နှစ်ကနေ (၅) နှစ်အထိ သုံးလို့ရသွားပါတယ် ဆိုတော့ အောက်မှာပဲဆက်ကြည့် ရအောင်ပါ။ လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် အဆင့်(၁) ၊၊ ။ ခြင်ရိုက်တံ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ကတော့ ဓာတ်ခဲ မအောင်တာ၊ မကောင်းတာ များပါတယ်။ဆိုတော့ ဓာတ်ခဲက ( ဗို့အား4volt) ရှိပါတယ်၊ နီးစပ်ရာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ ရောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံအရ အကောင်းဆုံးကတော့ panasonic 9v ထည့် လဲလိုက်ရင် (၂)နှစ်ကနေ (၅) နှစ်အထိ သုံးလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဆင့်(၂)။ ။တချို့က ဓာတ်ခဲကြိုးလွှတ်နေတတ်ပါတယ်။ ကြိုးလွတ်နေရင်တော့ … Read more
အိတ်ဇောမှာ ရေငွေ့တွေ့တာ ကောင်းလား မကောင်းလား
July 17, 2021 by Latest Myanmar News
အိတ်ဇောထဲက ဘာကြောင့် ရေတွေကျနေတာလဲ ??? ကားကို စနှိုးတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားရဲ့ အိတ်ဇောပိုက်ထဲက ရေအနည်းငယ်ကျလာတာကို မိတ်တွေတို့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါမှာ မိတ်ဆွေတို့ အရမ်းစိတ်ပူပြီး အင်ဂျင်မှာ ပြသနာရှိနေတာလား၊ ရေပိုက်တွေဘဲ ပေါက်နေတာလား၊ တခြားပြစ်ချက်တခုခုကြောင့်ဆိုတာကို စိုးရိမ်ကြဖူးပါလိမ့်မယ်။ ကားအိတ်ဇောပိုက်ထဲက ရေမှုန်လေးတွေကျလာတာ၊ ရေစက်တွေကျလာတာက ပုံမှန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားစတင်နှိုးတဲ့အချိန်မှာ အိတ်ဇောပိုက်ထဲက ရေမှုန်ရေမွှားတွေထွက်လာတာက အလွယ်ဆုံးပြောရရင် အင်ဂျင်အရမ်းလုံနေလို့၊ ကွန်းပရက်ရှင်းအားကောင်းနေလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ရပ်တန့်သွားတဲ့အခါ အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းထဲမှာ အိတ်ဇောငွေ့ တွေကျန်နေပါတယ်။ ကျန်နေတဲ့အိတ်ငွေ့များ လုံးဝအေးသွားတဲ့အခါ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ ရေငွေ့ဖွဲ့ (ငွေ့ရည်ဖွဲ့) ပြီး ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အင်ဂျင်ကို နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ မီးလောင်ခန်းမှာရှိတဲ့ ရေတွေက အိတ်ဇောပိုက်ကတဆင့်အပြင်ကိုထုတ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အိတ်ဇောပိုက်ထဲက ရေထွက်လာတာကို မြင်တွေ့ရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်ဇောပိုက်က ရေထွက်တဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျောက်ဇကာ … Read more
oxygen အိုးဝယ်ရင် ခေါင်းပြောင်းကို သတိထားပါ
July 15, 2021 by Latest Myanmar News
သတိထားဖို့ပါခင်ဗျာ CNG အိုးအလွတ်တွေကို ပုဂ္ဂလိကဆိုင်တွေမှာလိုက်ဝယ်နေကြတယ်။ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကလည်းရောင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်။ မရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကလည်းမရောင်းဘူး။အသိ Gas ဆိုင်တွေရှိရင်စုံစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ CNG အိုးတွေကိုဝယ်ပြီး ခေါင်းဖြုတ်တယ်။ပြီးတော့ ဆေးတယ်။ အထဲကို။ ဒါပေမယ့် CNG ဂျိုးတွေဟာဘယ်လိုမှဆေးလို့မကုန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်သလောက်ဆေးပြီး Oxygen ခေါင်း ပြောင်းတပ်တယ်။ပြီးတော့ oxygen ထည့်ပြီးရောင်းစားနေကြပါတယ်။ လူမမာရှူမိရင် သေပြီလေ။အဲဒီလို လူမမာတွေဘယ်လောက်များများသေပြီးကြပြီလည်းမသိဘူး။ ဒီမနက် မိသားစုလိုပတ်သက်နေတဲ့အိမ်က online ကနေတွေလို့တဲ့ Oxygen ၄ အိုးမှာလိုက်တာ၅ ရက်နေတော့ ဒီနေ့လာပို့တယ်။ မသင်္ကာလို့နားလည်သူကိုခေါ်ပြတော့ CNG အိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဖုံးပြန်ခေါ်တော့ လိုင်းပိတ်သွားပြီ၁၆ သိန်းပေးလိုက်ရတယ်တဲ့။ ၄ အိုးဖိုး။ရှူမိတဲ့ သေတဲ့ DB တွေက နှုတ်ခမ်းတွေပြာနေတယ်။အသားတွေပြာနေတယ်။အဆုတ်ကွဲသေတယ်ကြားပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်အိုးဝယ်ယူရာမှာ ဂရုစိုက်ကြပါခင်ဗျာ။နားလည်သူနဲ့ပြပြီးမှ ဝယ်ကြပါ။ ခရစ်ဒစ် Zawgyi သတိထားဖို႔ပါခင္ဗ်ာ CNG အိုးအလြတ္ေတြကို ပုဂၢလိကဆိုင္ေတြမွာလိုက္ဝယ္ေနၾကတယ္။ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြကလည္းေရာင္းေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ မေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြကလည္းမေရာင္းဘူး။အသိ … Read more
စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား (83)